को स्याउ वाच अहिले आफ्नो आईफोन supplant गर्न तयार छैन, अझै नवीनतम मोडेल एक भयानक भाग सबै एक्लै गर्न सक्नुहुन्छ: द्वारा र ठूलो घर मा आफ्नो आईफोन छोड्न सक्नुहुन्छ. यस लेख पढ्नुहोस् जुन मा iPhone मा पेयरिंग बिना एप्पल वाच को उपयोग कसरी गर्ने को बारे मा पूर्ण जानकारी शामिल छ.
धेरै स्याउ वाच आवेदन अत्यन्तै बस आफ्नो iPhone मा चलिरहेको कुराहरू लागि देखाइएको छ, र केही मुख्य विशेषताहरू तपाईं एक iOS ग्याजेट गर्न मिल्ने छैन कि बन्द मौका पहुँचयोग्य छन्.
हुन यो सक्छन् रूपमा, के हेर्ने गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जो विशिष्ट मोडेल मा निर्भर. उदाहरण को रुपमा, पहिलो वाच एक जीपीएस कलेक्टर छैन, त्यसैले आफ्नो टेलिफोन वरिपरि छैन भने के तपाईं अनुमान कदम विगतका जानुभएको जुदाई पालना गर्न सक्दैन. हामी तपाईंको हेर्ने के गर्न सक्नुहुन्छ मार्फत कुरा छौँ तल.
विन्डोज को लागी xender 7
1 बिना जोडा आईफोन एप्पल वाच प्रयोग कसरी
1.1 तपाईंको रन ट्र्याक
1.2 तपाईंको swims ट्र्याक
1.3 तपाईंको आवेदन अद्यावधिक
1.4 सामाग्री भुक्तान
1.5 विमानहरु मा प्राप्त वा फिलिमहरु हेर्न बाहिर जाने
1.6 संगीतलाई सुन, अडियोबुकहरू वा पडकास्ट
1.7 आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो स्वास्थ्य ट्र्याक
बिना जोडा आईफोन एप्पल वाच प्रयोग कसरी
तपाईंको रन ट्र्याक
तपाईं एक छ कि बन्द मौका मा जीपीएस सक्षम एप्पल वाच (श्रृंखला2onwards) के तपाईं आफ्नो टेलिफोन लिएर बिना आफ्नो रन पछ्याउन सक्छौं, र मनमा राख्दै तपाईं गैर-सेलुलर मोडेल मा स्ट्रिम छैन एप्पल संगीत गर्न सक्ने तपाईं आफ्नो घडी संगीत नक्कल र तपाईं चलान गर्दा यो ब्लुटुथ earbuds बाहिर सुन्न सक्नुहुन्छ.
तपाईंको swims ट्र्याक
यो वर्तमान एक शृंखला गर्न दुर्गम छ 1 मालिक, हामी चिन्तित छौं: हेर्ने शृंखला सम्म पानी प्रतिरोध प्राप्त भएन 2, के तिमी पौडी खेल्न गर्दा जो empowers यसलाई लगाउन.
स्याउ आफ्नै पौडनु निम्न केहि मौलिक छ, अझै प्रत्येक जरूरी अनुरूप गुटदेखि बाहिरको व्यक्ति आवेदन को भारी मात्रा छन्.
तपाईंको आवेदन अद्यावधिक
मूल स्याउ वाच आवेदन अत्यन्तै बस देखाइएको थियो: को साँचो आवेदन सबै आफ्नो iPhone यसको काम गरे र हेर्ने तपाईंले परिणाम प्रदर्शन.
त्यो watchOS संग परिवर्तन 2, जो स्थानीय आवेदन प्रस्तुत: छ, साँच्चै एप्पल जागा भाग्यो भनेर आवेदन.
सबै एप्पल घडियाँ चलिरहेको watchOS2वा पछि वाइफाइ मार्फत ताजा आवेदन हुन सक्छ, र केही आवेदन त्यसै गरी सेल फोन को माध्यम जीपीएस मा संगठित द्वारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ + सेलुलर मोडेल.
जब तपाईं स्थापित गर्नुभएको को iPhone हेरेको मा स्याउ पे आवेदन, तपाईं आफ्नो आईफोन उपयोगी छ राखेका बिना कुराहरू भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो आवेदन एक कार्ड नम्बर रूपमा प्रयोग गर्न जागा टाढा राख्नु भएको एक उल्लेखनीय टोकन बनाउँछ भन्ने आधार छ – कुनै पनि घटनामा एप्पल पे प्रयोग गर्न अनुमति, तपाईं आफ्नो टेलिफोन टाढा हुँदा.
तिर्न बाकी, मूल एप्पल पे-सिद्ध टर्मिनलमा आफ्नो हेरेको wave र निहित गरौं NFC (नजिकै क्षेत्र संचार) रेडियो यसको कुरा गर्न.
विमानहरु मा प्राप्त वा फिलिमहरु हेर्न बाहिर जाने
स्याउ वालेटले स्याउ जागा छ, त्यसैले केहि पहिले यो मा दूर राख्न – विमान टिकट, विद्युतीय टिकट र जो अरू पठनीय – आफ्नो iPhone बिना राम्रो र बांका काम गर्नुपर्छ.
Tragically, सबै संगठन यस grasped गरेका छैनन्, त्यसैले हामी अझै पनि नियमित pockets र satchels प्लास्टिक संग लोड संग वरिपरि meandering हुनुहुन्छ, तथापि, हामी कम्प्यूटरीकृत जाओ थप कुराहरू नियालेर हुनुहुन्छ.
संगीतलाई सुन, अडियोबुकहरू वा पडकास्ट
हेर्ने आफ्नो भण्डारण छ, जो केही संगीतको लागि सुलभ छ – त्यसैले तपाईं हेर्ने रिमोट earphones को एक जोडी संग निर्मित ब्लुटुथ जोडी र प्राप्त संगीत सार्ने उपयोग गर्न सक्छन्.
सामान्यतया तपाईं एक सेल मोडेल बिना Spotify वा एप्पल संगीत को कुनै पनि semblance संगीत स्ट्रिम गर्न विकल्प छैन, अहिलेसम्म त्यहाँ संभवतः एक रन लागि stockpiling भित्र आवश्यक हुन सक्ने सबै छ, एक व्यायाम वा छोटो ड्राइव. मामला मा तपाईं उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ एप्पल संगीत तपाईं आफ्नो एप्पल जागा प्लेसूचीहरू पहुँच विच्छेद गर्न सक्छन्.
केही अन्य गुटदेखि बाहिरको व्यक्ति आवेदन त्यसै साथै यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, तपाईं आफ्नो नारी मा आफ्नो पुस्तक रेकर्डिङहरु भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ श्रव्य.
आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो स्वास्थ्य ट्र्याक
को स्याउ वाच आफ्नो नाडी वा व्यायाम पर्दामा आफ्नो आईफोन सँग जोड्न आवश्यक छैन: यो जानकारी भण्डारण र तपाईं आफ्नो रन फर्काउने जब स्वास्थ्य आवेदन गर्न समक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, को Rec केन्द्र चक्र वा outing. त्यहाँ त्यसै गरी विभिन्न गुटदेखि बाहिरको व्यक्ति कल्याण पहुँच आवेदन गर्दै, उदाहरणका लागि, खाना.
यो शृंखला4मोडेल थप विकसित नाडी निम्न र पनि गिरावट स्थान एकदम थप कुराहरू लिन, जो सेल मोडेल जो तपाईंलाई एक dreadful गिरावट छ कि घटना मा उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई सावधानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
यस लेखमा बारेमा पूर्ण जानकारी समावेश जो पढ्न बिना जोडा आईफोन गर्न एप्पल वाच प्रयोग कसरी. यहाँ तपाईँले सबै विभिन्न कार्यहरु आईफोन जोडी बिना तपाईं आफ्नो एप्पल वाच प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्राप्त हुनेछ.
पीसी को लागी फेसबुक लाइट
पीसी विन्डोज को लागी ES फाईल एक्सप्लोरर डाउनलोड गर्नुहोस् 10, 8, 8.1,7 सित्तैमा 2020
विभाग डाउनलोड फेसटाइम
प्रतिलिपि अधिकार © 2021 जिम मूल्य सूची